(एजेन्सी) २५ पुस । मुखभित्र बारम्बार खटिरा आउने समस्याबाट हामीमध्ये कतिपय पीडित छौँ । अस्पताल नै जान पनि सामान्य समस्या, त्यही पनि एकपटक औषधि खायो फेरि केहीदिनमा उस्तै हुने । त्यसैले यसबाट छुटकारा पाउन निकै गाह्रो परिरहेको हुन्छ ।
मोटोपन यसरी पनि घटाउन सकिन्छ
रक्तचापको समस्या बढ्दै, ७० प्रतिशत मानिसमा समस्या
लालझाडीमा ४० जना कुष्ठरोगीको पहिचान
नरम, मुलायम र स्वस्थ कपाल बनाउन यसो गर्नुहोस् !
इबोला रोकथामका लागि आपतकालिन विज्ञ टोली तैनाथ
मस्तिष्कलाई जवान राख्न यसो गर्नुहोस्
भ्यागुते रोगबाट ९१ जनाको मृत्यु, यस्ता छन् लक्षणहरु
क्षयरोगी बढे, १० महिनाको अवधिमा ९४५ बिरामी
मेकअपबिना नै यसरी सुन्दर देखिन सकिन्छ !
यस्तो एलर्जीले सताए के गर्ने ?
सिताराम कट्टेल धुर्मुसलगायत कलाकारहरु वीर अस्पतालको स्वरुप फेर्न यसरी लागे(फोटोफिचर)
हात चम्काउने घरेलु उपायहरु यस्ता छन्